ego kwurula Oha obodo di iche | eactivo | Spanish maka kwabatara
Nke a na ọnwa na anyị chọrọ na-echetara ndị niile na ego ị na niile Spanish n'ógbè, otú ị na-ahụ ya niile ị na-ahụ ya mfe ozi. Galicia Asturias Cantabria País […]
Lee ndị 10 Kacha ọhụrụ na Spanish kwurula obodo na ego na anyị achọtawo. Asturias Galicia Murcia Navarre Basque Country Castilla-La Mancha Extremadura La Rioja Ceuta Melilla Ọ bụrụ na ị maara ndị ọzọ na ebe na chọrọ ịkọrọ ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ, Dee anyị!
Nke a na ọnwa anyị informaros ihe: 1. Anyị na-na na na gbakwunyere na anọ Spanish kwurula obodo ozi banyere ebe ndị i nwere ike na-aga na-eduzi gị ma ọ bụ na-amụta Spanish maka free. Anọ n'ógbè ndị: Andalusia, Cantabria, Valencia na Castilla-León Na ndị a na ị nwere 9 obodo na nri n'igbe! 2. Immigramob kere […]
News banyere foto zoo haziri Casa Africa.
Ọ bụ ọgwụgwụ nke September na anyị fọrọ nke nta chefuo agwa gị na anyị ugbua kere page na info anyị n'àgwàetiti ndị ọzọ, na Canary, M na-atụ unu na ha bara uru. Cheta-kwa-unu nwere na mpaghara dị ka Catalonia, Balearics, Aragon na Madrid. Iji hụ ya ị nwere ike pịa aha ma ọ bụ gaa na njedebe […]
Ozi na ibe ohuru a raara nye ndi kwurula obodo nke Aragon.